Tag: email matemplate | Martech Zone
Tag: email matemplate
ActiveTrail: Yakareruka-Kushandisa Email Kushambadzira uye Kushambadzira Automation Platform
Chishanu, December 29, 2017 Muvhuro, Ndira 1, 2018 Douglas Karr
Nematavi muUSA, Israel, Germany, France neLatin America, ActiveTrail inobatsira mabhizinesi emhando dzose uye hukuru, pasirese, kusimudzira hukama nevatengi vavo. Kubva zvatanga seprojekti mukati, kambani yave inotungamira, yakawanda-chiteshi email sevhisi, ichipa yepamusoro kushambadzira chikuva. ActiveTrail Email Kushambadzira Platform Zvimiro Sanganisira Email Kushambadzira - Nyore kuvaka inokatyamadza, nhare inopindura email mishandirapamwe. Izvo zvakakura chishandiso zvinosanganisira zvinokonzeresa, manejimendi manejimendi, mufananidzo mupepeti, zuva rekuzvarwa
Chishanu, July 10, 2015 Douglas Karr
Kana iwe uri kutsvaga kurudziro yeinotevera email template, uchitarisa kutenga template yeemail iyo iwe yaunogona kugadzirisa, kana kutotarisa kuvaka inoteerera email template kubva pakutanga - usatarise kupfuura Stamplia. Ivo vanopa rondedzero isingadhuri asi yakanaka tsamba, tsamba dzekutengesa, uye kunyange matemplate akagadzirira kuenda kuMagento, Prestashop ecommerce, Campaign Monitor kana Mailchimp. Imwe yeemaema templates ane tsananguro peji, maficha, uye
Mumwe email mubatsiri webasa isu hatina kugovana zvakanyanya nezve Campaign Monitor. Ivo vagara vairemekedzwa muindasitiri nekuda kwavo kwakatanhamara kunyorera, asi vakashanduka kuita yakasimba email sevhisi webasa kune bhizinesi kana vamiririri. Zvimwe zvezvinhu zvakasarudzika zveMushandirapamwe Monitor Branding - Campaign Monitor haiwedzere inowaniswa nemalogo kune ayo anobuda maemail uye iyo mushandisi interface inogona kunyorerwa kune yako agency kana bhizinesi. iPhone Kuzivisa - Campaign Monitor